जान्नुहोस् ‘एस’ बाट नाम सूरु भएका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् ?::mirmireonline.com
जान्नुहोस् ‘एस’ बाट नाम सूरु भएका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् ?
अंग्रेजीको १९ औ लेटर ‘एस’ किताबी ज्ञान बाहेक व्यवहारिक ज्ञानमा पनि ‘एस’ लेटरको महत्व रहेको बताइन्छ । ‘एस’ बाट नाम सूरु हुने मानिसहरु एकदमै मेहनती हुन्छन् । यिनीहरु कुरा गर्न यति सिपालु हुन्छन् कि जोकाहीलाई सजिलै आकर्षित गर्न सक्छन् । जहाँबाट जे ज्ञान मिल्न सक्छ उनीहरु त्यस ज्ञान प्राप्त गरेरै छोड्ने प्रयासमा जारी रहन्छन् । यस लेटरबाट नाम सुरु हुने व्यक्तिहरु प्रभावशाली हुन्छन् ।
उनीहरुको मेहनतका कारण धन, भौतिक सुख–सुविधा एवम् मानसम्मान हासिल गर्ने गर्छन् ।यिनीहरुको जीवनमा केही यस्ता समयहरु आउँछन् जहाँ निर्णय लिन कठिन हुन्छ । यिनीहरु साथीहरुसँगको सम्बन्धलाई गम्भिरताका साथ लिने गर्छन् ।
अन्य जीबन मन्त्र समाचार
धुलोबाट हुन्छ खतरनाक समस्या, यसरी बच्न सकिन्छ !
पुट्ट पेट छ- हेर्नुहाेस, पेटको बोसो घटाउने घरेलु उपाय
हात हेरेर स्वास्थ्य अवस्था थाहा पाउनुस्
कोठा सजाउन टिबेटियन आर्ट !
यी कुरामा ध्यान नदिए जिम गर्दा तपाईको शरीरको लागि खतरा हुन सक्छ
सफल डेटिङका लागि के गर्ने ?